Ahoana no fiantraikan'ny Apple's Mail Privacy Protection (MPP) amin'ny varotra mailaka? | Martech Zone
Miaraka amin'ny famoahana farany an'ny iOS15, Apple dia nanome ny mpampiasa azy Mail Privacy Protection (MPP), mametra ny fampiasana piksela manara-maso handrefesana ny fihetsika toy ny tahan'ny misokatra, ny fampiasana fitaovana ary ny fotoana hipetrahana. Ny MPP koa dia manafina ny adiresy IP an'ny mpampiasa, ka mahatonga ny fanaraha-maso ny toerana ho mahazatra kokoa. Na dia toa revolisionera aza ny fampidirana MPP ho an'ny sasany, ireo mpamatsy mailaka lehibe hafa (MBPs), toy ny Gmail sy Yahoo, dia nampiasa rafitra mitovy amin'izany nandritra ny taona maro.
Mba hahatakarana bebe kokoa ny MPP dia zava-dehibe ny mihemotra ary fantaro aloha ny fiovan'ny traikefan'ny fandrefesana taha misokatra ataon'ny mpivarotra.
Ny caching sary dia midika fa ny sary amin'ny mailaka (anisan'izany ny piksel fanaraha-maso) dia alaina avy amin'ny lohamilina voalohany ary voatahiry ao amin'ny mpizara MBP. Miaraka amin'ny Gmail, atao ny cache rehefa misokatra ny mailaka, ahafahan'ny mpandefa hamantatra ny fotoana nitrangan'ity hetsika ity.
Aiza no misy ny drafitr'i Apple tsy mitovy amin'ny hafa rahoviana sary caching mitranga.
Ireo mpanjifa rehetra mampiasa mpanjifa mailaka Apple miaraka amin'ny MPP dia hanana ny sarin'izy ireo mailaka alaina mialoha sy voatahiry rehefa alefa ny mailaka (midika izany fa alaina avy hatrany ny pikantsary fanaraha-maso rehetra), ka mahatonga ny mailaka hisoratra anarana nisokatra na dia tsy nanokatra ara-batana ny mailaka aza ilay mpandray. Yahoo dia miasa mitovy amin'ny Apple. Raha fintinina dia mitatitra ny tahan'ny fisokafan'ny mailaka 100% izao ny pixel izay tsy marina.
Nahoana no zava-dehibe izany? mampanankery fampisehoana data fa ny Apple dia manjaka amin'ny fampiasana mpanjifa mailaka amin'ny 40% eo ho eo, noho izany dia tsy isalasalana fa hisy fiantraikany amin'ny fandrefesana ara-barotra mailaka izany. Ohatra, ny fomba fanao ara-barotra napetraka toy ny tolotra mifototra amin'ny toerana, ny automatique amin'ny androm-piainana ary ny fampiasana teknolojia samihafa ho an'ny tolotra voafetra toy ny fameram-potoana fanisana dia ho sarotra kokoa, raha toa ka tsy azo ampiasaina amin'ny fomba mahomby izany satria tsy azo ianteherana ny taham-pivoarana.
MPP dia fivoarana mampalahelo ho an'ireo mpivarotra mailaka tompon'andraikitra izay efa mifikitra amin'ny fomba fanao tsara indrindra izay manatsara ny traikefan'ny mpanjifa. Raiso ny hevitra hoe afaka mandrefy ny firotsahana amin'ny fampiasana ny tahan'ny misokatra mba hialana amin'ireo mpanjifa mavitrika matetika, ary toy izany koa, miala amin'ny mpanjifa tsy mavitrika. Ireo fomba fanao ireo, rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy, dia mitondra tena ilaina amin'ny fanaterana tsara, saingy mihasarotra ny fampiharana azy.
Ny fanombohana ny GDPR taona vitsy lasa izay dia nampiseho ny antony iraisan'ny indostria ny varotra etika.
GDPR naka be dia be tamin'izay noheverina ho fanao tsara indrindra – fanekena mafonja kokoa, mangarahara bebe kokoa, ary safidy/safidy malalaka kokoa – ary nahatonga azy ireo ho takiana. Na dia noheverin'ny mpivarotra mailaka sasany ho aretin'andoha ny fanarahana azy, dia niteraka angon-drakitra tsara kokoa sy fifandraisana matanjaka kokoa amin'ny marika / mpanjifa izany. Indrisy anefa fa tsy ny mpivarotra rehetra no nanaraka akaiky ny GDPR araka ny tokony ho izy na nahita banga toy ny fandevenana ny fanekena amin'ny fanaraha-maso piksel amin'ny politika momba ny fiainana manokana. Io valin-teny io dia mety ho antony lehibe mahatonga ny MPP sy ny fomba fanao mitovy amin'izany ankehitriny antoka manaraka ny etika ny mpivarotra.
Ny fanambarana MPP an'i Apple dia dingana iray hafa mankany amin'ny tsiambaratelon'ny mpanjifa, ary ny fanantenako dia ny ahafahany mametraka indray ny fitokisan'ny mpanjifa ary manamafy indray ny fifandraisan'ny marika / mpanjifa. Soa ihany fa maro ireo mpivarotra mailaka no nanomboka nifanaraka tsara talohan'ny fanombohan'ny MPP, nahafantatra ny tsy fahatomombanan'ny metrikan'ny taham-pivoarana misokatra, toy ny fisamborana mialoha, ny fametahana sary mandeha ho azy / fanalefahana, ny fitiliana sivana ary ny fisoratana anarana bot.
Ka ahoana no ahafahan'ny mpivarotra mandroso raha jerena ny MPP, na efa nanomboka nifanaraka tamin'ny fitsipika ara-barotra etika izy ireo, na hoe vaovao ireo fanamby ireo?
Araka ny DMA tatitra fikarohana Mpanaraka mailaka Marketer 2021, ampahefatry ny mpandefa ihany no tena miantehitra amin'ny tahan'ny misokatra mba handrefesana ny zava-bita, miaraka amin'ny kitika ampiasaina avo roa heny. Mila mamindra ny fifantohan'izy ireo amin'ny fomba fijery feno sy feno kokoa momba ny hetsika fampielezan-kevitra ny mpivarotra, ao anatin'izany ny metrika toy ny tahan'ny fametrahana ny boaty fidirana sy ny mari-pamantarana lazan'ny mpandefa. Ity angona ity, miaraka amin'ny metrika lalindalina kokoa ao amin'ny fantson'ny fiovam-po toy ny tahan'ny kitiho sy ny tahan'ny fiovam-po, dia mamela ny mpivarotra handrefesana ny fahombiazany mihoatra ny fisokafana, ary fandrefesana marina sy manan-danja kokoa. Na dia mety mila miasa mafy kokoa aza ny mpivarotra mba hahatakarana ny antony manosika ny mpanjifany mba hampidirana azy ireo, ny MPP dia hamporisika ireo mpivarotra mailaka mba hieritreritra bebe kokoa momba ny fahazoana mpanjifa vaovao ary hifantoka amin'ny metrika izay tena hampandroso ny orinasany.
Ankoatr'izay, ny mpivarotra mailaka dia tokony hijery ny angon-drakitra misy ny mpanjifany ankehitriny ary manombana izany. Moa ve ny fifandraisana amin'izy ireo dia manara-penitra, manan-kery ary manome lanja ny farany? Miaraka amin'ny fanantitranterana amin'ny fahazoana mpanjifa bebe kokoa, matetika ny mpivarotra no manao tsirambina ny fotoana ilaina mba hahazoana antoka fa azo atao sy ilaina ny fifandraisana efa ananany ao amin'ny tahiry. Ny angon-drakitra ratsy dia manimba ny lazan'ny mpandefa, manakana ny fifampiraharahana amin'ny mailaka, ary mandany harena sarobidy fotsiny. Izay no tian'ny fitaovana Everest - sehatra mahomby amin'ny mailaka - miditra. Everest dia manana fahaiza-manao izay miantoka ny fahadiovan'ny lisitra mba ahafahan'ny mpivarotra mampifantoka ny fotoanany sy ny volany amin'ny fifandraisana sy ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa sarobidy izay tena manana fahafahana hiova fo, fa tsy mandany izany amin'ny adiresy mailaka tsy mety. vokatry ny bounces sy tsy azo alefa.
Rehefa azo antoka ny angona sy ny kalitaon'ny fifandraisana, ny fifantohan'ny mpivarotra mailaka dia tokony hifindra ho amin'ny fanaterana tsara sy ny fahitana ao amin'ny boaty fidirana an'ny mpanjifa. Ny lalana mankany amin'ny boaty fidirana dia sarotra kokoa noho ny eritreretin'ny ankamaroan'ny mpivarotra mailaka, fa i Everest koa dia manala ny vinavina amin'ny fandefasana mailaka amin'ny alàlan'ny fanomezana fomba fijery azo atao amin'ny fampielezan-kevitra. mpampiasa Everest,
Nitombo ny fahafahantsika manafaka, ary ao anatin'ny toerana tsara kokoa hanala ny tsy ilaina mirakitra an-tsoratra taloha kokoa tamin'ny dingana. Matanjaka kokoa ny fametrahana ny boaty fidiranay ary miakatra tsy an-kijanona… mba hahomby dia mandray ny fepetra rehetra izahay ary mampiasa ny fitaovana tsara indrindra amin'ny indostria hanaovana izany.
Courtney Cope, Talen'ny Data Operations ao amin'ny MeritB2B
Miaraka amin'ny fahitana ny mari-pamantarana ara-barotra mailaka sy ny lazan'ny mpandefa, ary koa ny famantarana ireo faritra misy olana sy ny fanomezana dingana hamahana azy ireo, ireo karazana fitaovana ireo dia tena sarobidy amin'ny mpivarotra mailaka.
Raha jerena ny MPP sy ny fanavaozam-baovao momba ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny varotra, ny mpivarotra mailaka dia tsy maintsy mandinika indray ny metrika sy ny paikady mba hahombiazana. Miaraka amin'ny fomba intelo - famerenana metrika, fanombanana ny kalitaon'ny angon-drakitra ary hiantohana ny fandefasana sy ny fahitana - ny mpivarotra mailaka dia manana ny vintana tsara indrindra hitazonana fifandraisana sarobidy amin'ny mpanjifany na inona na inona fanavaozana vaovao mivoaka avy amin'ireo mpamatsy mailaka lehibe.
Ampidino ny tatitra mailaka Tracker 2021 an'ny DMA
Tags: paomapaoma paomacourtney copekalitao angon-drakitra mailakamailaka mailakamailaka Marketingmetatra mailakamailaka manokanavarotra etikaEverestgdprGmailiOSios15adiresy IPfiarovana ny fiainana manokana amin'ny mailakampamatsy boaty mailakambpmeritb2bmailaka findaympppixel fanarahanamampanankeryvalidity everestserasera